Abantu abaningi bayazi ukuthi imibimbi ebusweni ingasetshenziswa ukwahlulela umlingiswa womuntu, kodwa bambalwa abantu abazi ukuthi lezi zigobo zinganquma isimo sempilo.
Ngokushesha noma kamuva, kodwa imibimbi ibonakala nhlobo. Kanjani ngokushesha noma kunqunywa ukuthi akuyona iminyaka, kodwa ngohlobo lesikhumba. Isibonelo, imibimbi enemibala ekhuni ayibonakali isikhathi eside, futhi isikhumba sihlala sihle futhi sinwebeka. Abantu abanesikhumba ekuqaleni bajwayele ukwakheka kwemibimbi, ngokuvamile uhlobo lwe-asthenic. Isikhumba sabo si-flaccid, sinama-flabby futhi sincane.
Uma ucabanga ngakho, imibimbi akuzona izitha zethu njalo. Indawo nokujula komkhombe kubonisa isifo esithile somzimba wethu. Uma ubheka ubuchopho ngokuhamba kwesikhathi, ungaxhumana nodokotela kusengaphambili bese uthola lesi sifo ekuqaleni.
Ingxenyeni engenhla ebusweni (ebunzini nasamehlo) inesibopho sesimo sengqondo. Imibimbi ye-wavy efana neyodwa ebunzini ibonisa ukukhathazeka, ukucindezeleka, ukungezwani okuqhubekayo nezinkinga. Ama-physiognomists abanokuhlangenwe nakho ahlukanisa ukuhlukahluka imibimbi yentukuthelo, ukuhlupheka, ukwesaba.
Ngamanye imibimbi, isimo asilula, ngoba sinefa. Wena, isibonelo, wathola ikhala elikhulu kubaba wakho - thola imibimbi yakhe noma inkibili yesibili ngobudala.
Futhi kukhona imibimbi etholakalayo, ethi kukhona into enhle kulokhu noma engxenyeni yomzimba:
1. Imibimbi emisiwe. Ubunzima obuphakathi phakathi kwezinga lebhuloho lempumu kubonisa izinkinga zesisu. Imibimbi ephakathi kwamashiya ngakwesokudla - ukungasebenzi kwesibindi kanye ne-gallbladder; kwesokunxele - i-spleen. Imbimbi eguquguqukayo - izinkinga endaweni ye-cervico-occipital (i-osteochondrosis).
2. Izinhlanzi zeNasolabial. Imibimbi ejulile, ehambisana nhlangothi zonke zombili ibonisa ukungasebenzi komuthi wamathumbu. Uma amafolda edonswa kakhulu ngokwethembeka, kungukuthi ukuphazamiseka kwamathunjini. Uma i-groove ejulile ngakwesokudla - qaphela umsebenzi wesibindi nesibindi senyongo.
3. Imicu engacacile engezansi ngaphezu komlomo ophezulu. Njengomthetho, kukhona abamele abesilisa ababuthakathaka kuphela. Lezi zibopho ebusweni zikhuluma ngezifo zegazi. Imibono ephikisayo evela emaceleni omlomo phansi - isisu sokugaya esiswini esinomsebenzi we-secretory kanye nesandulela sezinkinga ze-pancreatic.
4. I-Cheek-chin imibimbi. Qaphela umsindvo wesisu ne-pancreas. Ukuphikisana okuphambene nezinga lesikhumba kungaba uphawu lwezinto eziqhamukayo ezingeni lesibindi noma isikhumba esincane.
Ngakho-ke, njengoba kubonakala, imibimbi ayisona izitha zethu nhlobo, kodwa ngisho nezihlobo eziwusizo kakhulu emzabalazweni wezempilo kanye nobuhle. Ufuna ukuqeda amafolda ebusweni bakho? Yiya kudokotela bese uhlola isilwane lapho lokhu noma ukuchofoza kubonisa khona.
Yebo, uma konke kuhambisane nempilo, gcina i-arsenal ye-creams ebushelela imibimbi (injabulo yethu, manje noma yimuphi inkampani ehloniphayo ikhiqiza uchungechunge lwezimali ezinjalo). Thatha imishini yokuzivocavoca ekhethekile emisipha yobuso bese uzama ukulandela ubuso bakho. Khona-ke imibimbi ibonakala ngokunciphisa, futhi ubuso buyoba bushelelezi futhi buhlanzeke.
Ukwelashwa kweso emehlweni
Indlela yokubhekana nokuguga ngosizo lokubunjwa ubuso
Ukunakekela isikhumba ezungeze amehlo
Indlela yokuhlanza ubuso
Amaqiniso amnandi anama-orgasm
Ama-biscuits e-pumpkin nge-chocolate emhlophe
Uphikisana nocansi ngaphambi komshado. Yini okufanele ngiyenze?
Indlela yokuziphatha nomuntu odonsa izidakamizwa
Amangqamu ama-muffin anama-walnuts
Konke mayelana nokukhulumisana ngomlomo nokungaqondile
I-balloon yangasese yokunciphisa isisindo esiningi
U-Anastasia Volochkova uziqhayisa ngezambatho zangaphansi, isithombe
Amavithamini adingekayo izinwele nezipikili
Kuthiwani uma umuntu wakho ehaha?
Izingxabano: abesifazane abathintekayo ngobudlova